“Waxa aan diyaar u ahay in Musharixiinta aan kala fadhiisto
Raysul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la fadhiisto cid waliba oo cabasho ka ah Guddiga Doorashada 20/21 oo hormuud u ah hirgelinta doorashada Soomaaliya.
Rooble ayaa sheegay in mas’uuliyad culus ay saaran tahay Xukuumaddiisa, sidaas awgeed uu diyaar u yahay in uu raadiyo qof waliba oo cabasho qaba si uu u fahamsiiyo guddiga & micnaha uu u leeyahay dhismaha Dowladda cusub ee 4-ta sano soo socota.
“Xilka in la qaado waa mas’uuliyad culus, waxaa jira Rag walaalahey ah oo aan si fiican u garanayo oo musharixiin ah oo cabasho ka keenay Guddiyada doorashada, waxa aan diyaar u ahay in aan kala fadhiisto si aan uga qanciyo tabashadooda” Sidaasi waxaa yiri RW Rooble.
Musharixiinta Hogaamiyaha Soomaaliya 20/21 oo u badan mas’uuliyiin xilal kala duwan dalka kasoo qabtay ayaa sheegay in Guddiga Doorashada lagu biiriyay xubno xubno katirsan Nabadsugidda, Madaxtooyada & Shaqaalaha Rayidka ah.
Xukuumadda Soomaaliya waxaa horyaalla fulinta heshiisyada Doorashada 20/21 ee Hogaamiyayaasha Federaal & heer Dowlad Goboleedyada doodo adag, kulamo & wada tashiyo dheer kadib go’aamiyay nuuca doorasho & jadwalkeeda.
Haddaba, Raysul Wasaare Rooble suuragal ma tahay in Musharixiinta Hogaamiyaha 20/21 uu kala xaajoodo Cabashada ay ka qabaan Guddiga Doorashada?
axadle 5761 posts
“Hogaamiyayaasha Ka cabanayeysa Guddiga Doorashada dib ha u
Inter Milan vs. Real Madrid – Kulanka Geeri ama Guul,